Buses mankany Bali ~ Journey-Assist - Kura tu bass, Bemo, Peramotour, Sarbagita
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Fitateram-bahoaka any Bali » Bus any Bali
Ny aotobisy iray mankany Bali dia saika ny hany fomba ara-dalàna fitateram-bahoaka mampitaha ireo tanàna samihafa manerana ny Nosy. Ny ankamaroan'ny orinasan'ny bus ao an-toerana dia tsy manana tranonkalany manokana, ary azonao atao ny mahita ny saran-dàlana ary hazavao amin'ny lalana miaraka amin'ny mpamily na mpiasa orinasa ihany. Mandritra izany fotoana izany dia misy ny sakam-piteny iray matetika mipoitra, satria tsy ny Bali rehetra no mahay teny anglisy.
Matetika ny tsy fitaterana fiara no mampitony, fa ny saran-dalana ho an'ny orinasam-pifandraisana madinika dia avo 10 heny ambany kokoa raha oharina amin'ny saran'ny orinasa bus busalinà. Ny tena zava-dehibe dia ny hoe ny ankamaroan'ny fiara fitateram-bahoaka dia rehefa maraina, ka tsy voatery mankany an-tanàna foana, mandehandeha ary miverina amin'ny andro iray ihany.
Orinasa mitondra fiara any Bali
fiara fitateram-bahoaka Sarbagita (Sarbagita)
Buses Sarbagita (Sarbagita)
Ny orinasam-pandeha malaza indrindra any Bali angamba Sarbagita. Manana lalana maromaro izy, izay malaza indrindra izay manomboka ao amin'ny seranam-piaramanidina Bali. Misy lalana iray hafa malaza manomboka any Nusa Dua, mandalo an'i Jimbaran, seranam-piaramanidina, Kutu ary Sanur, ary mifarana ao Batubulan (gara fitateram-bahoaka). Ny saran-dalana amin'ny làlana farany dia 3 rupee ao Indonezia, ny bus mandeha amin'ny 500:5 ka 00:21. Ity orinasa ity koa manana ireo lalana ireo:
Avy amin'ny seranam-piaramanidina amin'ny fiara fitateram-bahoaka
Seranam-piaramanidina - Tabanan (gara ao Denpasar). Ny saran-dalana dia 7 rupee Indoneziana. Mijanona 000 fiara fiatoana eo anelanelan'ny teboka voalohany sy faran'ny làlana.
Seranam-piaramanidina - Nusa Dua. Ny saran-dalana dia 3 Indonezia.
Seranam-piaramanidina - Batubulan. Ny saran-dalana dia 3 Indonezia.
fiara fitateram-bahoaka Kura2bus
(Kuratubas na Kura-Kura bass)
Bus Kura2bus (Kuratubas na Kura-Kura bass)
mafy Kura2bus miasa any atsimon'i Bali. Manana lalana 8 fiara izy. Ny saran-dàlana dia miankina amin'ny lalana ary mitentina 20 - 000 r Indonezianina. Amin'ny lalana sasany, ny fiara fitateram-bahoaka dia mihodina isaky ny antsasaky ny maraina ka hatramin'ny hariva, fa amin'ny làlambe hafa kosa dia mandeha indroa isan'andro ihany ny bisy. Noho izany antony izany dia tokony hahita mialoha ny fandaharam-potoana eo amin'ny tranokalan'ity orinasa ity ianao.
fiara fitateram-bahoaka Peramatour (Peramatur)
Bus Peramatour (Peramatur)
Misy orinasa lehibe bus hafa, indrindra, Peramatour, izay manompo mpizahatany indrindra. Ny bisy amin'ity orinasa ity dia mahazo aina, ny mari-pana rivotra no miasa amin'ny salon.
Ny fandaharam-bus Peramotur
Lisitra sy saran-dàlana no voatanisa ao amin'ny tranokalan'ity orinasa ity - Peramatour.comizay alohan'ny tapakila no namandrihana (tsy maintsy hokasaina farafahakeliny iray andro mialoha).
Amin'ny alàlan'ny bus amin'ity orinasa ity dia afaka mankany amin'ny teboka maro ianao (saingy tokony marihina fa ny ampahan-dàlana dia mandeha indray mandeha isan'andro): Sanur, Amed, Gili, Chandidas, Kuta, Ubud, Lovin, Senggigi, Nusa Penida, Padang Bay, Tulamben.
Ny vidin'ny fitsangatsanganana dia miovaova amin'ny lalana samy hafa ary ao anatin'ny 35 ... Indonezia rupees. Ny lafo indrindra dia làlana, izay ao anatin'izany, ankoatra ny fifamoivoizana bus, fiampitana amin'ny sambo mankany amin'ny nosy hafa any Indonesia.
Fiantsonana fitateram-bahoaka any Kut sy Denpasar
Any Denpasar, fiantsonana fitateram-bahoaka sy boemo maromaro izay hiainga mankany amin'ny tanàna hafa any Bali:
avy eto, ny fiara fitateram-bahoaka dia mihazakazaka mankany amin'ny faritra avaratra sy andrefana amin'ny faritry ny nosy: terminal Batubulan, Tanah Lot, Mengvi, Tabanan, Antosari, Lalang Liggah, Bedugul, Medevi, Negara, Gitgit, terminal Sukasad, terminal Gillimanuk (ferry mankany Java dia alefa avy ao).
Batubulan Terminal (Batubulan)
Ny fiara fitateram-bahoaka dia miakatra avy any mankany amin'ny lalana toy ny Sukawati, Mas, Ubud, Chandidasa, Gianiar, Klungkung, Bandley, Padang Bey (avy eto dia mandao ny nosy Gili sy Lombok), Amlapura, terminal Penarukan.
avy eto, mandeha amin'ny zotra mankany bus toy ny terminal Ubung, terminal Kereneng (any Denpasar), Kuta, Sanur, seranam-piaramanidina, Nusa Dua.
Central Parkir (Senatral Parkir)
Ny gara ao Bus dia antsoina hoe Central Parkir. Ny adiresiny: Raya Kuta No.58e.
Ny orinasam-pandeha 2 (Sarbaghta sy Permatur) ihany no manana tranonkala miasa manokana manana fandaharam-potoana mazava, fa ny mpitatitra hafa ao Bali dia manana fikorontanana, ka mila mandamina fitsangatsanganana am-bava ianao ary hahita foana hoe aiza no halehan'ny bus iray.
Minibus any Bali (Bemo)
Bemo dia minibus kely. Ity dia minibus iray misy haavo 12 mpandeha. Ity karazana fitaterana ity dia tsy azo antsoina hoe mety. Ny hafainganana dia ambany be, loto, vovoka, stuffiness, ny fofon'ny solika ary ny tabataba manjaka amin'ny salon. Saingy mandritra ny dia mankany Bemo dia afaka mifankafantatra amin'ny tsirony eo an-toerana ianao, na izany aza, ankoatra ny hatsembohana sy ny sata. Ny toetra iray hafa tsy mahafinaritra an'ity fitaterana ity dia ny fijanonana matetika matetika amin'ny fahazoana mpandeha amin'ny dingana rehetra.
Mandeha amin'ny lalan-kaleha sasany ny bemos, saingy sarotra ny mahazo ny lalana mankany amin'ny minibus manokana. Ny fivoahana sy ny fizahana dia azo atao na aiza na aiza - amin'ny lafiny rehetra eny an-dàlana. Mba hanaovana izany dia mila maninjitra ny tananao fotsiny ianao mba hahatakaran'ny mpamily fa te hipetraka amin'ny bohemo ianao. Ny saran-dalan'ny dia dia mitaky vola iray. Mandoa renivohitra indonezianina 4 eo an-toerana ny mponina any. Raha hitan'ilay mpamily fa vahiny ny mpandeha iray dia mazàna izy mitaky bebe kokoa. Raha tsy te-hiakatra mihoatra ny loko manga ianao dia afaka manome azy ireo tena mitovy be amin'ny karama indizeny ary avelao. Saingy mila mitandrina ianao, satria matetika ireo mpamily Bemo dia maharitra sy mahery setra.
Amin'ny ankapobeny, ny fitsangatsanganana amin'ny fiara fitateram-bahoaka dia haingana kokoa sy mahazo aina kokoa, indrindra amin'ny vaovao izay misy fantsom-pifandraisana.
Salanisan'ny salanisa 5 / 5. Isan'ny isa: 5